Banyere Anyị - Yunhua Intelligent Equipment Co., Ltd.
Anhui Yunhua Intelligent Equipment Company (Yunhua maka mkpụmkpụ)
Anhui Yunhua Intelligent Equipment Company (Yunhua obere) bụ a nnyocha na mmepe mmepụta, nke bụ a technology n'ichepụta ụlọ ọrụ na-ere dị iche iche ọrụ nke ulo oru ígwè ọrụ na-. YOOHEART bụ nke mbụ ụlọ robot ika, ndị mbụ OEM soplaya.
YOOHEART robot bụ ngwaahịa anyị
YOOHEART robot bụ ngwaahịa anyị. Dị ka ọkachamara robot ọkachamara na ụlọ ọrụ R & D, YOOHEART robot nwere ndị otu zuru oke ma dị mma. YOOHEART robot nwere oke ọnụ ahịa-arụmọrụ ruru, nwere ike inye ndị ahịa ịgbado ọkụ, egweri, njikwa, stampụ na ọrụ ndị ọzọ dị iche iche nke ígwè ọrụ mmepụta ihe.
Yunhua dị na Xuancheng, Province Anhui, Xuancheng bụ ọdụ ụgbọ njem nke ọdụ ụgbọ elu Anhui, Anhui-Jiangxi, ụzọ ụgbọ okporo ígwè Xuanhang ebe a, njem dị mfe. E nwere Huangshan na ndịda, Shanghai, Hangzhou na obodo ndị ọzọ dị n’ebe ọwụwa anyanwụ, yabụ ụlọ ọrụ anyị na-enwe ọmarịcha ọnọdụ ala. Nhazi akụrụngwa ụlọ ọrụ bụ klas mbụ nke China. Anyị na-ebu isi na teknụzụ, ma jiri aka ha wee mepụta robot isi akụkụ - RV retarder, na mgbakwunye na robot mgbochi nkukota technology na ndị ọzọ nchọpụta Kemịkalụ.
Yunhua etinyewo aka n'inye ihe ndi na-emeputa ihe ndi mmadu na-emeputa ihe ndi mmadu na ndi ozo maka otutu ulo oru, meziwanye oru nke akpaaka na ibelata oru na onu ahia ha. Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ ndị a haziri ahazi, ọzụzụ teknụzụ na ọrụ dị mma ahịa na-azụ ndị ahịa dị ka mkpa ha si dị ka iji hụ na ndị ahịa ọ bụla zụtara ngwaahịa anyị nwere ike ịnwe ezigbo ahụmịhe nke ahụmịhe.
Yunhua robot na YOOHEART ika nwere ike ji mee maka ịgbado ọkụ, Ijikwa, palletizing, eserese, itinye na ibutu, nzukọ wdg Anyị nwere ndị ọrụ nke anyị, nke nwere ike ịnye azịza zuru ezu robot automation.
Ebumnuche anyị bụ ime ka ụlọ ọrụ ọ bụla jiri rọbọt mepụta uru maka ndị ọrụ na ọha mmadụ! Anyị na-atụ anya ọbịbịa gị na imekọ ihe ọnụ, anyị ga-abụ onye gị na ya ga-atụkwasị obi.
Anyị nwere ụlọ ọrụ aka anyị na ụlọ nlele nke nwere ike ịnye ihe nlele n'oge na-adịghị anya.
Anyị na-atụ aro mgbe niile maka ndị ahịa maka nrụpụta. ma kwado ụdị ndị ọhụrụ dị mkpa nye ndị ahịa iji nye mmụọ nsọ na mmepe ọhụụ.
Anyị nwere ndị otu anyị nwere nke nwere ike ịchekwa oge na ọnụ ahịa maka ndị ahịa.
Na ogologo oge na a pụrụ ịdabere na ọkọnọ yinye, anyị nwere ike ijikwa obere iwu na nzọ ụkwụ iwu na elu àgwà nnọọ ngwa ngwa iji belata ihe ize ndụ na ngwaahịa maka ndị ahịa.